Cele News Archives - Page2of 30 - Khitamyin
CDMလုပ်ပြီး ရိက္ခာမရှိပေမဲ့ သိက္ခာရှိရှိလိပ်ပြာလုံစွာနဲ့ လယ်စိုက်စပါးရိတ်နေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး
December 7, 2021 Ko Khit 0
CDMလုပ်ပြီး ရိက္ခာမရှိပေမဲ့ သိက္ခာရှိရှိလိပ်ပြာလုံစွာနဲ့ လယ်စိုက်စပါးရိတ်နေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး CDMလုပ်ပြီး လယ်စိုက်စပါးရိတ်နေတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ရိက္ခာမရှိပေမဲ့ သိက္ခာရှိလိပ်ပြာလုံစွာနဲ့ဘဝကို ရိုးသားစွာရုန်းကန်နေတဲ့ ထက်အုပ်ကြီး လေးစားတာထက်ပိုပါတယ်ဆရာမကြီး🙏 ဆရာမကြီးလိုသာ ဆရာဆရာမအားလုံးနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးသာ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးခဲ့ကြရင် နှလုံးသား‌တွေ လှကြရင်.စိတ်ဓာတ်တွေ ရဲရင့်ပြတ်သားကြရင်…… သတ္တိတွေရှိကြရင်…….စည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြရင်……. ရောင်နီလာမဲ့နေ့သစ်ကို အမြန်ရနိုင်မှာပါ…. Daw […]
ကြည့်ရှုသူတိုင်းမျက်ရည်ဝဲရတဲ့ ချစ်သူ့ဝေရဲ့ ကဗျာရွတ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး
December 6, 2021 Ko Khit 0
ကြည့်ရှုသူတိုင်းမျက်ရည်ဝဲရတဲ့ ချစ်သူ့ဝေရဲ့ ကဗျာရွတ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ချစ်သုဝေကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အဆိုတော်လုပ်ရင်း မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ခံခဲ့ရသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း အဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးလို့ ခေတ်ခေတ်နဲ့ သစ်သစ် လို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို […]
ဖုန်းဒေတာဈေးများ တက်လာမည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပီး “အသေအချာ တွေးကြည့်ရအောင် “ဟု ပြောလာသော ပန်ဆယ်လို ဖုန်းဒေတာဈေးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး “အသေအချာ တွေးကြည့်ရအောင် “လို့ ပြောလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
December 4, 2021 Ko Khit 0
အသေအချာ တွေးကြည့်ရအောင် ကိုယ်တွေဘက်ခြမ်းက လူတန်းစား ညီတယ်။ လူလတ်တန်းစားတွေ များတယ်။ ငွေကြေးအဆင်ပြေသူတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ထားစရာမရှိအောင် ချမ်းသာမနေဘူး။ ငွေကြေးအဆင်မပြေသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ပျှမ်းမျှတွက်ရင် လူလတ်တန်းစားတွေလို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ အားသာချက်က အချင်းချင်း ဝေမျှတတ်ကြတယ်။ သဒ္ဓါတရားကောင်းတယ်။ ထောက်ပံ့တတ်ကြတယ်။ တော်လှန်ရေး ဆယ်လကျော်ကာလမှာ ဒီစိတ်တွေကြောင့်ပဲ ရုန်းကန်နေနိုင်ကြဆဲပဲ။ […]
ယွန်းယွန်း ကိစ္စ မင်းမော်ကွန်း ဒဲ့ဆော် လိုက်ပြီ
December 2, 2021 Ko Khit 0
သရုပ်ဆောင် စည်သူဝင်းနဲ့ ယွန်းယွန်းတို့ကတော့ Double Dating ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Double Dating အစီအစဉ်မှာ ယွန်းယွန်းကအောင်မင်းခန့်ရဲ့ ပါတနာဖြစ်သလို စည်သူဝင်းကလည်း သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့ ပါတနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း Double Dating အစီအစဉ်ထဲကအတွဲလိုက်အတိုင်း စည်သူဝင်းနဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကို သဘောတူခဲ့ကြပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ […]
December 1, 2021 Ko Khit 0
ပြည်သူ့ဆန္ဒမဲဖြင့် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အစိုးရလက်ထက်တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဒေါက်တာ ထားထားလင်းကို အဂတိမှုဖြင့် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီက အမှုဖွင့်လိုက်ကြောင်း စစ်ကောင်စီ၏ သတင်းစာများ တွင် ကြေညာထားသည်။ အာဏာသိမ်းပြီး ၁၀ရက်အကြာ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀) တွင် […]
ယနေ့မှာ အသက် (၄၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေး ကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသား ပြေတီဦး
November 30, 2021 Ko Khit 0
ယနေ့မှာ အသက် (၄၃) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လေး ကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသား ပြေတီဦး ယနေ့မှာ အသက် ၄၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရတ်မြတ်လေးကျရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်ကြီး ပြေတီဦး ထိမိ ပီပြင်တဲ့ သရု ပ်ဆောင်ချ က်များ နှင့် အပြုံးချို ချိုေ တွကြောင့် ပရိတ်သတ် […]
ယွန်းယွန်း First time ကြောင့် ၁၀ လကျော်ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေကို မမေ့လျော့ဖို့ PDF သတိပေး
ယွန်းယွန်း First time ကြောင့် ၁၀ လကျော်ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေကို မမေ့လျော့ဖို့ PDF သတိပေး ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေနေတွေကြောင့် သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းတို့ ပြသာနာကြောင့် နိုင်ငံအရေးကို သတိမမူမိနေတဲ့ပြည်သူတွေကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ သတိပေးပါပြီ။ ပြည်သူတွေဟာ အခုဆိုရင် ယွန်းယွန်ရဲ့ ကာမကိစ္စလေး တစ်ခုကြောင့် ပြောရရင် ပေါ်ပင် လုပ်နေကြတာဟာ […]
ဆယ်လီသတင်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပြီး အမေ့ကို သတိမရတဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်
November 29, 2021 Ko Khit 0
ဆယ်လီသတင်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ပြီး အမေ့ကို သတိမရတဲ့ သူတွေကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ညီမလေး (ရုပ်သံဖိုင်) ဗီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ အရေးမပါတဲ့ ဆယ်လီသတင်းတွေ ခနရပ်ပြီး အမေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ညီမလေး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ကောင်စီက […]
ခါးကျိုးရက်နဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ချီပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ – ချစ်သုဝေ ( အောက်တွင်ရုပ်သံပါသည် ) အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့နေ့ကတည်းက ခါးကျိုးရက်နဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ချီပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ- ချစ်သုဝေ အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ကစပြီး သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ချီကာ ထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်း၊ (၈၈) အရေးအခင်းတုန်းက သူက(၄) […]